Étiquette : Vita Malagasy
Omano dieny izao ny taona vaovao 2018: mamarita tanjona, mametraha fanamby ary asio lamina ny fiainanao. Indro ary atolotra anao ny Diary an-kisary 2018 misy ireo pejy ilainao mba hanana fiainana milamina sy feno fifaliana. Inona avy no hitanao ao? Diary 2018 hafa kely Tsy misy datin’andro fa manaraka izay fandaminanao Ahitanao ny halaviran’ireo toerana... Lire la Suite →
Indramiko ny famaritana nomen’i E. D. ANDRIAMALALA manao hoe « Ny fandrosoana dia fihezahana hihataka amin’ny maha-biby mba hanakatra fiainana sy fiaraha-monina ambonimbony kokoa sy mahafinaritra kokoa. » Noho izany, ny fandrosoana dia tsy midika velively ho fanariana ny maha-malagasy fa fijanonana amin’ny maha-malagasy ao anatin’ny fivoarana ho amin’ny tsaratsara kokoa. Nahoana ary isika no mihevitra fa... Lire la Suite →